Muka Dhaabaa:Eessayyuu yoo jiraattan, muka dhaabuu waanti si dhorku hin jiru! – Oromedia
Home » Oduu » Muka Dhaabaa:Eessayyuu yoo jiraattan, muka dhaabuu waanti si dhorku hin jiru!
Muka Dhaabaa:Eessayyuu yoo jiraattan, muka dhaabuu waanti si dhorku hin jiru!
May 15, 2017 @oromedia 0 Oduu,
(Oromedia, Melbourne, 14 Caamsaa 2017) Hawaasti Oromoo kutaa bulchiinsa Victoria, Australia keessa jiraatan Caamsaa 14 bara 2017 Ayyaana Irreechaa Arfaasaa kabajatan.
Ayyaana Irreechaa yeroo sadaffaaf Melbourne kibba bahaatti kan argamu, Tulluu Daandenong irratti kabajame kana irratti Irreechaan gaachan aadaa namaa qofaa otuu hin taane, hundee eegumsa naannoo akka ta’e ibsameera.
Hawaasti Oromoo ayyaana kana kabajatan kanneen sababa cunqursaa fi roorrootiin biyya isaanii irraa dhiibanii bahan ta’us, bakka jiraatanitti aadaa fi eenyummaa Oromoo eeggachaa fi deebisanii guddisaa jiran.
Ayyaanni kun akkuma aadaa Oromootti eebbba maanguddootaan eegalame.
Ittaansuunis, duudhaa Ayyaanichaa otuu hin gaddiisiin, Irreeffannaan taasifame. Namuu marga jiidhaa qabate, muka guddaa jalatti irreeffachuun kan darbeef galata, kan dhufuuf immoo kadhannaa galfate.
Barumsa aadaa ayyaana kana irratti kenname irraa akka hubatametti, Irreechaan ayyaana Oromoo dur- durii, kan dhaloota haaraan deebifamee haaromfamaa jiru.
Ayyaanni kun baroota dheeraaf addaan cite ture. Amma immoo qabsoo Oromootiin deebi’ee dagaaguun ummata Oromoo walitti fidee humneessaa jira.
Ayyaanota akka Irreechaa kana garuu deebisanii guddisuu fi dagaagsuun hojii laayyoo miti. Akka hayyooti ibsanitti, sababa roorroo gabrummaatiin maalummaan ayyaanichaa bakka gariitti akka badu taasifameera; bakka gariitti immoo akka lagatamu godhamee kan alagaan bakka buufameera. Kanaaf, waan bade deebisuun kun wal’aansoo keessaa fi alaa gaafata.
Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa baranaa irratti barumsa kenname keessaa tokko Irreechaan akkuma aadaa fi eenyummaa Oromoof eegumsa godhu, nageenya naannoo fi bosonaaf illee xiyyeeffannoo ni kenna.
Ayyaana Irreechaa mallattoo nagaa fi araaraa ti; kan Arfaasa kun immoo mallattoo magariisaa fi qabbanaa waan ta’eef, Oromoon kamuu bakka jirutti, Muka Dhaabuun, nageenya naannoof dirmatuu qaban.
Mata dureen Ayyaana baranaas: “Muka Dhaabaa-Eessayyuu yoo jiraattan, muka dhaabuu waanti si dhorku hin jiru!” jedhame.
Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa kun akkuma ayyaanota kan biro, waan darbe qofaa otuu hin taane, waan dhufu illee of-eeggannoon akak keessa darbaniif dhaamsa dabarse qaba. Ijoollee ofii aadaa fi afaan barsiisuu, muka dhaabuun nageenya naannoo eeguu fi iccitii sabaa eeguun bilisummaa falmachuun dhimmoota amma illee bakka iyyuutti irratti hojjatamuu qabu.
Kana malees, mairgoota namoomaa kabajuu, waliif kabajaa qabaachuu fi waloomaan jiraachuun kanneen xiyyeeffannoo barabaadan keessaa ti.
Hunda caalaa, kan Oromoota irraa eegamu, namuu gannatti waan deemuuf kan dadhabe gargaaruu, kan beela’enyaachisuu fi kan laafe humneessuun akka aadaa Oromoo dur-duriitti of eeggannaan bara walbaasuudha.
Previous: Kora xiqqaan miseensotaa gaggeeffame; Guyyaan Gootota Oromoos kabajame.
Next: Seemaan hundee seera uumaa fi uumama Oromoo ti.